Kitoatoa ny mpitondra eto amintsika | Ny Valosoa Vaovao
Kitoatoa ny mpitondra eto amintsika
par gvalosoa | Mar 7, 2018 | Edito |
Mitohy hatrany ny tsy fahafehezan’ny fitondrana Hvm intsony ny fitantanam-pirenena. Efa fotoana ela no nisian’izany toe-javatra izany kanefa mbola mitohy ihany mandraka ankehitriny volana maromaro mialoha ny fifidianana filoham-pirenena. Miezaka ny ho tsara endrika sy hanatsara ny sariny eo imason’ny vahoaka Malagasy izy amin’ny fihetsiketsehana be samihafa izay tsy mitondra ny firenena mankaiza tao anatin’ny fotoana elaela izay indrindra fa vao nitsidika ny resaka fifidianana sy ny fotoana fiomanana ho amin’izany. Arakaraka ny nanaovany izany koa anefa no vao mainka ahitany olana samihafa maneho ny fahagoragoran’ny fitantanana ataony. Iny niaraha-nahita sy nandre iny ny zava-nisy nataon’ny minisitry ny raharaham-bahiny sy lehiben’ny diplomasia Malagasy tany Frantsa. Mbola tsy nanapaka akory ny governemanta dia efa nilaza ny lehiben’ny diplaomasia Malagasy, fa amin’ny 24 novambra sy 24 desambra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa. Raha hijery ny fihodinana faharoa, ao anatin’ny fanaovan’ny olona ny fetin’ny misasakalin’ny Krismasy izany no hanisa vatom-pifidianana, tena izany no hoe ministra miteniteny foana! Santionany ihany ireny, fa efa be izay zava-nitranga izay, raha tsy hilaza fotsiny ny fihetsik’ ingahy filohan’ny antoko Hvm vao nahazo ny toeran’ny Filohan’ny Antenimeran-doholona rehefa nanilika ny senatera Honoré Rakotomanana. Andro vitsy taorian’ny nahazoany ny seza, dia iny nisalovana ny anjara asan’ny minisitra misahana ny fitaterana sy ny praiministra lehiben’ny governemanta tamin’ny famahana ny olana teo amin’ny sehatry ny fitaterana mihazo ny lalam-pirenena faha-2 iny, tamin’ny fotoana nanaovan’izy ireo fitokonana noho ny resaka tsy fandriampahalemana nitranga tany akaikin’i Brickaville iny.
Filohan’ny Antenimeran-doholona mamaha ny olana eo amin’ny sehatry ny fitaterana, angamba tsy fahita any amin’ny firenen-kafa miezaka mandroso izany. Iaraha-mahita ihany koa ny zava-nitranga tany amin’ny raharahan’ny orinasa AAA Andranomanelatra, ka nahitana manam-pahefana izay tsy tokony hiditra amin’ny raharaha akory no miditra miezaka manafay ny tomponandraikitr’izany orinasa izany. Hatramin’ny omby ompian’ity orinasa ity aza dia ataon’izy ireo fairano, ka mety ho farty mihitsy ireo omby ompiana ao raha mbola tsy avelan’ny fitondrana hiditra ny vilona sy ny sakafo tokony hohanin’ireo biby fiompy ireo. Izao indray dia atao an-takelaka moderina sy alefa amin’ny haino aman-jery samihafa mbamin’ny fitaovan-tserasera samihafa izay azo ampiasaina rehetra ny filazana fa raràna tsy azo amidy ny vokatra avoakan’io orinasa io. Toe-javatra mahamenatra sy fanalam-baraka ny firenena izany fepetra izany ary sahin’ny tomponandraikitra eo anivon’ny fitondrana Hvm raisina. Mpitondra izay mitady hamita-bahoaka amin’ny resaka fisandratan’i Madagasikara. Tsy fahita velively ary tena fady any amin’ireo tany an-dalam-pisandratana sy efa misandratra rehetra izany fepetra izany. Vokatra tsy manapoizina olona akory fa tena ilain’ny vahoaka Malagasy izay efa marefo ara-pahasalamana aza izany noho ny tsy fahampian’ny otrikain’ny sakafo hohaniny isanandro. Izao indray raràna tsy hivoaka amidy hojifain’ny vahoaka io vokatra be otrik’aina io. Fa Mpitondra inona loatra ireto mpitondra firenena ireto e? Izany no tena hoe mpitondra kitoatoa. Raha tena mpitondra manam-pahendrena marina dia na zavatra bitika mety hahasoa vahoaka aza dia hikelezan’aina fatratra ny hiaro sy hampitombo azy. Anisan’ny nampivoatra sy nampandroso haingana ireo firenena maro aziatika izany, fa tsy ny resaka Z.E.S na ny faritra manokana ara-toekarena izay anaovana angoan-tenda sy sinema lava izao akory.